GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Mgbe ụfọdụ, ihe e dere n’ihe ndị ọkachamara gwutere n’ala na-egosi na ọ bụ onye a kọrọ akụkọ ya na Baịbụl nwe ihe ahụ ma ọ bụ na onye ahụ na onye a kọrọ akụkọ ya na Baịbụl mekọrọ ihe. Dị ka ihe atụ, n’afọ 2011, ndị ọkà mmụta n’Izrel dere banyere ihe a chọtara nke gosiri na onye nwe ihe ahụ na onye a kọrọ akụkọ ya na Baịbụl mekọrọ ihe. Ihe ha chọtara bụ igbe a chọrọ mma, nke e ji ụrọ na-acha nzu nzu rụọ. Ihe dị na ya bụ ọkpụkpụ onye nwụrụ anwụ. Igbe ahụ anọruola puku afọ abụọ.
Ihe e dere n’igbe ahụ bụ: “Miriam ada Yeshua nwa Keyafas, onye nchụàjà Meazaya, onye Bet Imraị.” Nnukwu onye nchụàjà nke so kpee Jizọs ikpe ma maa ya ikpe ọnwụ bụ Keyafas. (Jọn 11:48-50) Ọkọ akụkọ ihe mere eme, bụ́ Fleviọs Josifọs, kpọrọ ya “Josef, onye a na-akpọ Keyafas.” O doro anya na onye nwe igbe ahụ bụ onye ikwu Keyafas. Ihe e dere n’ụdị igbe ahụ a chọtaburu, nke e chere na ọ bụ nke nnukwu onye nchụàjà ahụ, bụ “Yehosef nwa Keyafa,” ya bụ, Josef, nwa Keyafas. * N’ihi ya, Miriam bụ onye ikwu Keyafas.
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ndị Mgbe Ochie n’Izrel kwuru na ndị ha natara igbe ahụ e tinyere ọkpụkpụ Miriam bụ ndị gara zuo ohi n’ebe e liri ndị mgbe ochie. Mgbe a tụlechara ihe ahụ e gwutere na ihe e dere na ya, o doro anya na ọ bụ nke Miriam, bụ́ onye si n’ezinụlọ Keyafas.
E nwere ihe ọzọ igbe ahụ e tinyere ọkpụkpụ Miriam mere ka anyị mata. O kwuru banyere Meazaya, nke ezinụlọ ya bụ ndị ikpeazụ n’ime ụzọ iri abụọ na anọ e kere ndị nchụàjà ndị na-eje ozi n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem. (1 Ihe 24:18) Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ndị Mgbe Ochie n’Izrel kwuru na ihe ahụ e dere n’igbe ahụ gosiri na e nwere ihe jikọrọ “ezinụlọ Keyafas na ezinụlọ Meazaya.”
Ihe ahụ e dere kpọkwara aha Bet Imraị. E nwere ụzọ abụọ e nwere ike isi kọwaa aha ahụ e dere. Ụlọ ọrụ ahụ kwuru, sị: “Ụzọ nke mbụ bụ na Bet Imraị nwere ike ịbụ aha otu ezinụlọ ndị nchụàjà, ya bụ, ụmụ Ịma (Ezra 2:36-37; Nehemaya 7:39-42), bụ́ ndị ụmụ Meazaya so n’ụmụ ụmụ ha. Ụzọ nke abụọ e nwere ike isi kọwaa ya bụ na Bet Imraị bụ obodo Miriam ma ọ bụ obodo ndị ezinụlọ ha niile.” Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, igbe ahụ e tinyere ọkpụkpụ Miriam mere ka o doo anya na ndị Baịbụl kpọrọ aha bụ ndị dịrị ndụ, ndị nwekwara ezinụlọ ha si.
^ para. 3 Ị chọọ ịgụkwu banyere igbe e tinyere ọkpụkpụ Keyafas, gụọ isiokwu bụ́ “Nnukwu Onye Nchụàjà nke Mara Jizọs Ikpe Ọnwụ,” n’Ụlọ Nche Jenụwarị 15, 2006, peeji nke 10-13.